6 -da barnaamij ee ugu wanaagsan ee lagu barto Bortuqiiska | Androidsis
6 -da barnaamij ee ugu fiican ee lagu barto Bortuqiiska
Nerea Pereira | 31/08/2021 19:20 | Codsiyada Android
Luqadaha aad bay muhiim u yihiin in la safro meel kasta oo aad awoodid inaad la xiriirto dhibaato la'aan. Mid ka mid ah afafka aadka u soo jiita ayaa ah Portuguese Haddii aad xiisaynayso barashada luqadda, waxaad haysataa codsiyo aad u tiro badan oo kaa caawin doona barashadaada.
Inkasta oo marka ay timaado barashada luuqad, ikhtiyaarka ugu fiican ayaa ah inaad mar walba aado dalka hooyo si aad dhaqso u barato luqadda oo aad ugu dhaqanto dadkaas. Laakiin waxaan ka warqabnaa inay tahay ikhtiyaar dhib badan dad badan. Markaa teknolojiyaddu waxay noqon kartaa saaxiibkaaga ugu fiican markaad isticmaaleyso barnaamijyada lagu barto Bortuqiiska oo samee marka aad wakhti haysato oo aanad waxba bixin. Maantana waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah codsiyada ugu fiican ee loogu talagalay.
1 Codsiyada lagama maarmaanka u ah barashada Bortuqiiska
Codsiyada lagama maarmaanka u ah barashada Bortuqiiska
Kuwani waa codsiyada ugu wanaagsan ee lagu qiimeeyo barashada Bortuqiiska, mid kasta oo ka mid ah wuu ka duwan yahay wuxuuna leeyahay waxbarasho kala duwan dhammaantoodna waa la shaqsiyeeyay iyadoo loo eegayo isticmaale kasta. Waana in barashada gujinta moobilkaaga ama kiniinigaaga ay tahay ikhtiyaar ku habboon inaad ku tababarto meel kasta waqti kasta oo firaaqo ah oo aad haysato, iyadoon loo eegin inaad leedahay xiriir internet iyo in kale.
Markaa, iyada oo aan la sii hadal haynin, waxaan kaaga tagaynaa waxa aan u aragno inay yihiin barnaamijyada ugu fiican ee lagu barto Bortuqiiska laga soo diro moobilka oo leh natiijooyinka ugu fiican.
Waxaan ku bilownaa mid ka mid ah codsiyada ugu fiican ee kuu oggolaanaya inaad si fudud u barato Boortaqiiska oo aad u dhammaystiran. Nidaamka barashada ee Duolingo waa iyada oo laga gudbayo heerarka iyo kasbashada qadaadiic kaa caawin doonta furitaanka layliyo iyo waxqabadyo kale. Waxaad dooran kartaa qorshaha waxbarasho ee aad rabto inta u dhexeysa 5 ama 20 daqiiqo. Shaki la'aan waa mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan maadaama ay kaa caawineyso barashada luqadda iyada oo loo marayo dhegeysiga fahamka, wada sheekaysiga, akhriska, gelinta naxwaha iyo ereyada.
Oo tixgelinaya luqado badan oo laga heli karo Duolingo, Runtu waxay tahay in kani yahay mid ka mid ah barnaamijyada ugu wanaagsan barashada luuqadaha, ha ahaato Boortaqiis ama wax kale oo laga heli karo arjigan awoodda badan.
Duolingo - Baro Ingiriisiga iyo Luqadaha kale ee Bilaashka ah
Waan sii wadaynaa Busuu codsi la mid ah Duolingo laakiin waxaa ku jira shaqooyin aad u xiiso badan si dhakhso wax loogu barto. Ujeeddadu waa inay kaa caawiso inaad ogaato fikradaha aasaasiga ah, erayada, weedhaha caadiga ah ee aasaasiga u ah wada sheekaysiga iyo garashada naxwaha.
Habka waxbarashadiisu waa iyada oo maqal ah, jimicsi ah, caqabadaha higaada iyo cayaaraha si aad u dhaqan geliso wax kasta oo aad ka baratid qayb ahaan intarneedka iyo khadka intaba.. Waxa kale oo aad haysataa ikhtiyaarka ah inaad aragto sidaad ku garanayso wax kasta oo aad baratay wada sheekaysiga maalinlaha ah ee dadka ku hadla afka hooyo si aad u dhammaystirto luuqadda iyo lahjadda.
Shaki la'aan waa ikhtiyaar kale oo aad u fiican oo la tixgeliyo, gaar ahaan sababta oo ah suurtagalnimada in lagu shaqeeyo offline, sidaa darteed way ku habboon tahay barashada Boortaqiiska mobiilkaaga inta safraya.
Busuu: Ingiriis baro
Codsiyada kale ee ugu fiican ee lagu barto Bortuqiiska waa HelloTalk. Codsigan wuxuu ku siinayaa fursad aad ku la hadal dadka ku hadla afka Brazil iyo Portugal si ay kaaga caawiyaan hagaajinta iyo hagaajinta sarbeeb. HelloTalk ayaa kuu oggolaan doonta inaad wacdo adiga oo aan wax kharash ah ku bixin shaqsi ahaan laakiin sidoo kale koox maqal iyo muuqaal ah, u dir farriimaha qoraalka iyo codka ama turjum weedho iyo qoraallo si aad u baratid erayo badan oo luqadda ah.
Shaki la'aan waa aalad aad u wanaagsan oo kuu oggolaan doonta inaad barato lahjadaha iyo tibaaxaha habka hadalka caadiga ah ee luqadda iyo dadka dhabta ah ee kaa caawin doona khibradda luqadda.
HelloTalk - Baro Luqadaha
Developer: HelloTalk Baro Luuqadaha App
Waxaan ku sii wadnaa codsi kale oo wanaagsan si aan u baranno Boortaqiiska iyo tiro wanaagsan oo luqado ah oo sidoo kale ka mid ah kuwa ugu dhameystiran uguna sahlan in la isticmaalo maalinba maalinta ka dambeysa. Waxaad baran kartaa qawaaniinta erayada iyo naxwaha sidoo kale waxaad hagaajin kartaa ku dhawaaqistaada luqadda iyada oo ay ugu wacan tahay farsamooyinka ay ku takhasuseen luuqadaha.
Maskaxda ku hay inay tahay codsi bilaash ah oo kuu oggolaanaya inaad soo dejiso casharka koorso kasta, laakiin haddii aad rabto inaad gasho liistada dhammaystiran ee heerarka waa inaad bixisaa rukunka bil kasta.Diiwaangelintaani waxay ku siin doontaa marin u helidda in ka badan 5.000 oo koorsooyin iyo in ka badan 14 luqadood si aad wax uga barato meel kasta iyo mar kasta oo aad rabto. Waa ikhtiyaar wanaagsan in luuqadaha si fudud loo barto oo aad kula talin karto saaxiibbada ama qoyska.
Ha ku kadsoomin xayeysiiska xad -dhaafka ah ee barnaamijkani bixiyay si uu uga dhex muuqdo dhammaan noocyada warbaahinta. Runtii waa adeeg si dhab ah u shaqeeya sidaa darteed waxay mudan tahay in la isku dayo. Iyadoo la tixgelinayo qiimeynta aadka u wanaagsan ee ay ku leedahay dukaanka dalabka Google, waxaa iska cad inay tahay mid ka mid ah codsiyada ugu wanaagsan ee lagu barto Boortaqiiska taleefankaaga gacanta.
Babbel: Baro Luqadaha
Codsi kale oo aad ugu eg kii hore waa Tandem, kaas oo kuu oggolaanaya inaad la hadasho dadka u dhashay waddanka aad rabto inaad ku hadasho luqadda oo aad la sheekaysato ardayda kale. Kaliya waa inaad iska diiwaangelisaa arjiga oo dadku waxay u muuqan doonaan inaad raaci karto oo waliba doonaya inay bartaan afkaaga si aad isu kaalmeysaan barashada luqadda iyo aqoonta ku saabsan.
Codsigu wuxuu leeyahay nidaam saxaya dhammaan khaladaadkii naxwe ahaaneed ee aad lahayd waxaadna baran doontaa sababta ay u khaldan tahay sidoo kale ka caawinta halkaas inay xiriir wanaagsan ka dhexeeyaan labadooda. Waxay sidoo kale kuu oggolaaneysaa inaad wicitaanno fiidiyow ah kula sameyso isticmaaleyaasha ama nooca pro ee aad qof ahaan ku wada sheekeysan karto haddii aad ku fikireyso inaad dhowaan u safarto waddanka si aad u hesho talo iyo ereyo badan oo luqadda ah.
Developer: Tiknoolajiyadda Tripod GmbH
Memrise waa codsi aad u xiiso badan oo kaa caawin doona inaad xusuusato fikradaha iyo ereyada iyada oo loo marayo sawirro ama fiidiyowyo mowduuc gaar ah.
Sidaad qiyaasi karto, waxaa loogu talagalay kuwa raba inay bartaan erayo badan oo ku saabsan luqadda maadaama ay hore u haysteen waxyaabaha aasaasiga ah. Faa'iidada ayaa ah in fiidiyowyada ay sameeyeen kuwa ku hadla afka dhabta ah si ay ugu sahlanaato barashada luqadda.
Memrise: Baro Ingiriisiga Fudud
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Codsiyada Android » 6 -da barnaamij ee ugu fiican ee lagu barto Bortuqiiska
Smartflix ma shaqeeyo: Beddelka ugu fiican